OnePlus 9T: endri-javatra mety, voafaritra, vidiny ary fandefasana | Androidsis
Aaron Rivas | | Finday, OnePlus
El OnePlus 9T Io no finday avo lenta avy amin'ny mpamokatra sinoa natomboka. Betsaka ny antenaina amin'ity finday ity. Ary izy io dia iray izay hananana, mifototra amin'ireo fivoahana marobe sy vinavina nipoitra tato ho ato, miaraka amina toetra avo lenta sy fika manokana momba ny teknika, ka, manomboka izao, isika dia miatrika ny iray amin'ireo fandefasana andrasana indrindra amin'ny 2021 .
Ity terminal ity dia ho tonga toy ny fanatsarana ny efa fantatra sy deraina OnePlus 9, ny finday voalohany an'ny orinasa izay tonga tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity niaraka tamin'ny OnePlus 9 Pro, zokiny lahy. Izany no antenaina hahatongavany miaraka amin'ny fanatsarana maro sy ny vaovao ho vavolombelona tsy ho ela. Mazava ho azy, alohan'ny hitrangany dia efa an-tanana maromaro isika ny mety ho toetra, manokana teknika ary ny pitsopitsony momba ny vidiny mety sy ny daty fandefasana azy eny an-tsena.
1 Ho tonga miaraka amin'ny fakantsary tsara kokoa ny OnePlus 9T, ny zava-baovao
2 Daty famoahana mety ho an'ny OnePlus 9T
Ho tonga miaraka amin'ny fakantsary tsara kokoa ny OnePlus 9T, ny zava-baovao
Mazava fa ny OnePlus dia nahavita tsara tamin'ny OnePlus 9 sy 9 Pro. Ary ho an'ny finday roa tonta dia niara-niasa tamin'i Hasselblad, mpanamboatra fakan-tsary malaza any Suède, ny mpamokatra sinoa, mba hanomezana rafitra finday avo roa tonta ireo finday roa ireo. mba hiatrehana ny avo lenta an'ny Samsung, Huawei ary ireo mpanamboatra hafa toa an'i Apple, miaraka amin'ireo iPhones, izay niavaka teo amin'ny tsena ho an'ny fakantsary finday, faritra iray izay tsy nampiavaka an'i OnePlus ho iray amin'ireo ambony taloha.
Miaraka amin'ity taranaka vaovao ity dia mendrika ny hoderaina ity orinasa ity noho ireo sary azon'ny OnePlus 9 azony, ary ity dia zavatra iray izay te-hamerina amin'ny OnePlus 9T, ilay terminal avo lenta avo lenta. Ary io dia voalaza fa ity finday ity dia hankafy ihany koa ny tombotsoan'ny sonia miaraka amin'i Hasselblad, saingy miaraka amina sensor hafa hafa noho ilay hitantsika ao amin'ireo sainam-pirenena voalaza etsy ambony.
Ao ny fanontaniana, misy ny resaka izay hitondran'ny OnePlus 9T tsena tsy ho ela fakan-tsary fakan-tsary 50 MP. Ity solomaso ity dia ho Sony IMX766 ary 1 / 1.56 santimetatra ny habeny, ary koa maka sary 1,0 µm (avy amin'ny 0,8 µm). Noho ireo fepetra voalaza ireo, ity finday ity dia antenaina hahazo sary tsara kokoa noho ny efa natolotry ny OnePlus 9, na dia mbola tokony ho hita ihany aza.
Toy izany koa, mbola tsy misy zavatra fantatra momba ireo fakantsary fakantsary hafa izay hiaraka amin'ilay mpitifitra 50 megapixel voalaza etsy ambony. Na izany aza, azo inoana fa, ho an'ny ambiny, manana isika ny fikirakirana sary mitovy amin'ny OnePlus 9. Noho izany, amin'ity telefaona ity dia hisy fakan-tsary zahana 50 MP misy zoro f / 2.2 ary makro 2 MP miaraka amin'ny f / 2.4 aperture ho an'ny sary monochrome. Mandritra izany fotoana izany, ho an'ny sary eo anoloana toy ny selfie sy antso an-tsary, ny finday dia hanana MP 16 miaraka amina f / 2.4 aperture. Na izany aza, ity dia zavatra hamafisinay na holavinay avy eo, marihina.
Etsy ankilany, momba ny efijery OnePlus 9T, antenaina ho tonga ny telefaona miaraka amin'ny tontonana Super AMOLED miaraka amina toetra mitovy amin'ilay voalohany OnePlus 9, noho izany dia azo inoana fa manana diagonal 6.55 santimetatra izy ary mamokatra vahaolana FullHD + 2,400 1,080 x 120 teboka. Ho fanampin'izay, araka ny efa nampoizina, dia hanana tahan'ny famelombelona XNUMX XNUMX. Ny zavatra hafa hananan'ny tontonana amin'ity fitaovana ity dia ny mpamaky ny dian-tànana eo ambanin'ny efijery ary ny lavaka eo amin'ny efijery ho an'ny fakantsary selfie. Izay miorina amin'ny zoro havia ambony.
Ny chipset an'ny processeur izay hananana an'ity telefaona ity, raha ny loharanom-baovao avy amin'ny fivoahana sy famoahana dia ny Qualcomm Snapdragon 870, sombin-kazo manana ny fikirakira fototra toy izao: 1x Cortex-A77 amin'ny 3.2 GHz + 3x Cortex-A77 amin'ny 2.42 GHz + 4x Cortex-A55 amin'ny 1.8 GHz. Ity SoC ity koa dia manana ny Adreno 650 GPU izay hitantsika tao amin'ny Snapdragon 865 sy manana haben'ny node 7 nanometro. Ho setrin'izany, hiaraka amin'ny RAM 8 GB sy toerana fitahirizana anatiny 128 GB ao amin'ny OnePlus 9T.
Ny bateria finday dia hanana fahaiza-manao mitovy amin'ny an'ny OnePlus 9, noho izany antenaina fa hitranga izany 4,500 mAh ary manohana haitao haingam-pandeha haingam-pandeha 65 W Warp, izay mameno ny terminal feno ao anatin'ny 40 minitra eo ho eo. amin'ny alàlan'ny port USB Type-C.
Ny fiasa isan-karazany dia misy ny rafitra fiasa Android 11 eo ambanin'ny OxygenOS 12, ka izany no finday voalohany an'ny orinasa namoaka ity kinova OxygenOS ity.
Daty famoahana mety ho an'ny OnePlus 9T
Ny OnePlus 9T dia mbola tsy navoakan'ny mpanamboatra tamin'ny fomba ofisialy. Noho izany, ny fepetra teknika rehetra sy ny toetra voalaza ao amin'ity finday ity dia mety hiova amin'ny faritra sasany raha vao manambara izany ny orinasa ary mandefa izany eny an-tsena. Noho io antony io indrindra no tsy misy na inona na inona fantatra momba ny datin'ny fandefasana ny OnePlus 9T. Na izany aza, antenaina ny hahatongavan'ny finday indraindray Oktobra miaraka amin'ny vidiny 700 euro eo ho eo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny zavatra rehetra antenaina amin'ny OnePlus 9T: mety asongadinina, masontsivana, vidiny ary daty famoahana